Date My Pet » 4 Dingana mba Alefaso ny Lavorary Voalohany Message amin'ny vehivavy iray
Last nohavaozina: Sep. 23 2020 | 4 min namaky
Ve ianao te-hahita ny vehivavy ny nofy amin'ny alalan'ny aterineto mampiaraka? Great, rehetra tsy maintsy atao dia ny hanorina ny mombamomba amin'ny iray amin 'ireo toerana malaza an-tserasera sy ny fiarahana mijery ny alalan' ny mombamomba ny voasoratra anarana vehivavy.
Aza fotsiny mba jereo kely ny sary. Dia tsara foana ny mijery ny sary tsara tarehy, fa raha te ho fantatra raha mety ho natao ho samy hafa, dia tokony hamaky ny mombamomba ary jereo raha mitovy tombontsoa, fialam-boly sy ny zavatra inoana.
Rehefa avy nijery ny alalan 'ny mpivady ny mombamomba ary nahita ankizivavy iray, fara fahakeliny, izay ianao liana amin'ny, tonga ny fotoana mba hanoratra ny hafatra voalohany ho azy. Izany no matetika ny anjara izay olona tena manao fahadisoana iray, fara fahakeliny. Tsy maninona raha manatona ny ankizivavy amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto, nanomboka ny resaka eo amin'ny lala-mahitsy dia tena zava-dehibe.
Mety ho menatra noho ny zavatra Indro, Izaho hangataka anao izao, fa raha vonona ny hanatsara ny mampiaraka ny fiainana, tokony mamaly ny fanontaniana manaraka amim-pahatsorana:
Efa nanoratra hafatra voalohany ny tovovavy izay nampiasaina talohan'ny hifandray ankizivavy hafa? Angamba ny hafatra toa izao:
Nanana ny fijerena ny mombamomba azy, ary mihevitra aho fa tena tsara tarehy ianao.
Raha manoratra hafatra matetika toy izany, tsy maintsy ho nanontany tena hoe nahoana ny an-tserasera ny ezaka fiarahana dia tsy dia nahomby. Dia tsy hampiaiky volana ny vehivavy amin'ny alalan'ny fanoratana azy ny hafatra ihany ry zalahy folo hafa naniraka azy talohan'ny.
Mba skyrocket ny aterineto fahombiazana mampiaraka tsy maintsy mametraka ny tenanao afa-tsy ny sarambabem-bahoaka ny olona, ​​izay mampiasa ny mitovy foana andalana sy manara-penitra izany hafatra. Rehefa avy nametraka ny tenanao manokana, anao dia tsy hisy intsony fifaninanana.
1. Personalize ny Message
Fahadisoana voalohany fa be dia be ny olona ho any anaty aterineto mikasika ny fiarahana dia tsy dia mampiasa vola ny fotoana mba hitady tena anarany, na mba farafaharatsiny personalize ny hafatra miaraka amin'ny anaram-bositra. Ny vehivavy sasany dia mety milaza ny tenany ho "sweet89", nefa tsy midika izany fa tsy hahita ny tena anarany tao amin'ny mampiaraka ny mombamomba.
Hitako be dia be ao anaty aterineto mampiaraka mombamomba ny vehivavy izay nanoratra ny tena anarany tany amin'ny toerana tany profil, na dia nampiasa anarana sandoka ho toy ny anaram-bositra. Amin'ny alalan'ny fametrahana ny ezaka mba hahitana ny tena anarany, no hampisehoanao fa efa namaky ny mombamomba. Be dia be ny vehivavy tsy manao izany ho omena ary raha toa ka dia iray amin'ireo vitsy izay raha ny marina ry zalahy miahy kokoa noho ny sary, tanteraka izy ireo resy.
Ankoatra izany, isika tia ny olombelona hihaino ny anarany. Na dia tena manana ny hafatra voalohany, izy dia hahatsapa ny fihetseham-po mahery fifandraisana raha miantso azy amin'ny anarany. Raha tsy mahita ny tena anarany, tokony farafaharatsiny personalize ny hafatra miaraka amin'ny anaram-bositra, fa tsy amin'ny fampiasana ny levitra "Hey ".
2. Ilazao teny fankasitrahana ny tsirairay
Inona no tsara indrindra azonao omena fankasitrahana ny vehivavy? Ny iray izay marina sy izay tsy izy nandre in-tapitrisa alohan'ny. Tena mety hitranga mihitsy fa vehivavy tsara tarehy eo an-tserasera toerana mampiaraka mahazo be dia be ny hafatra avy ry zalahy.
Mety ho avo izy rehetra fa niteny taminy hoe tsara tarehy sy mahafatifaty izy. Raha toa ianao ka tovolahy iray hafa fotsiny, izay nanoratra ny marina fa hiray farany ry zalahy folo nanoratra azy, dia mety tsy hamaly. Ahoana raha milaza izy fa ny hevitrao aminy hoe tsara tarehy, satria maitso ny masony mijery namana sy ny tsiky nanao mitsiky koa ianao?
Izany dia zavatra izay ry zalahy ireo folo izay nanoratra azy teo anatrehan'ny tsy hoe. Ny fanomezana ny vehivavy fiderana olona iray dia tsara kokoa noho ny hoe foana ny zavatra ihany fa hafa ry zalahy efa nilaza taminy. Izany dia maneho ny tena hoe nahoana ianao no tia azy fa tsy ho any amin'ny hafa an-jatony ny vehivavy tsara tarehy ihany koa manana sary.
3. Nahoana no izy Special?
Okay, Fantatro fa te-hanoratra azy, satria ianao tia azy, na amin'ny kely na ny sary dia mampiseho amin'ny mombamomba azy, fa inona no antony hafa koa te-hahafantatra azy? Miala tsiny fa ny tsara sy ny tsiky lava volo blond tsy tokony ho ny hany antony te-hahafantatra ny vehivavy amin'ny toerana mampiaraka an-tserasera.
Dia hahatsapa manokana izy rehefa manova ny ankapobeny fiderana ho fiderana manokana, dia hahatsapa fa izy mbola tsara kokoa rehefa manoratra azy antony vitsivitsy antony nahaliana anao, izay tsy misy ifandraisany amin'ny ara-batana ny tarehiny.
Raha ampiana iray na roa antony mahaliana anao tao amin'ny, izay mifandray mivantana amin'ny toetra sy ny fialam-boly fa voatanisa ao amin'ny mombamomba azy, ny vintana ny hividy valin-tsara dia ho tena avo.
Vehivavy te-hahatsapa zavatra manintona, fa te-hihaona ihany koa ny olona izay liana amin'ny ara-batana mihoatra noho ny nataon'ny tarehy. Ny filazana azy amin'ny hafatra voalohany fa mahaliana anao tao amin'ny tarehiny sy ny toetrany, nametraka ny tenanao ianao ankoatra ny rehetra ry zalahy izay niteny taminy hoe tsara tarehy izy, nefa tsy mahatsikaritra ny hoe nosoratany tao amin'ny mombamomba ny halehiben'ny tia mikarakara ny hafa.
4. Nahoana ianao Lavorary ny tsirairay Other?
Ankehitriny efa efa ho ny zavatra rehetra ilainao ny hafatra voalohany tonga lafatra. Tsy misy afa-tsy iray ingredient izay mbola tsy hita. Fantany fa tianao ny tarehiny sy ny toetrany, fa izy ihany koa no mahalala ny antony toy ny toetra?
Mazava tsara tarehy dia hoe nahoana ianao no tia azy tarehiny, fa tsy hoe miharihary ny antony mahaliana anao tao amin'ny toetrany. Mazava ho azy dia afaka manoratra fa tia ny hoe izy no tsara lavitra, fa ahoana izy no matoky fa tsy manao azy ny dibera, nefa tsy midika izany.
Ny zavatra farany tsy maintsy atao, mba hamenoana ilay hafatra voalohany tonga lafatra dia ny hilaza azy hoe nahoana tianao ny fialam-boly sy ny toetrany. Rehefa nilaza taminy fa mankasitraka ny fitiavana lavitra, satria efa nandeha ny Asia rehetra sy te ho any Amerika Atsimo amin'ny herintaona, dia ho tsapany hoe nahoana ianao no tonga lafatra ho an'ny tsirairay.